Lugaha cagaha inta aad uurka leedahay
Lugahaaga oo aad uur qaadeysid inta aad uurka leedahay waa mid ka mid ah cabashooyinka ugu caamsan ee hooyooyinka uurka leh. Dumarka intooda badani waxay la kulmaan dhibaatadan marka caloosha horay loo soo gaabiyo, laakiin waxaa dhacda in xanuunka muruqyada iyo dareenka raspiraniya ee hooseeya ay muuqdaan bilowga uurka.
Sidaa darteed, sababta lugaha u jiido xilliga uurka iyo waxa la sameynayo xaaladaha noocaas ah, aynu sii wadno arrimahan si faahfaahsan.
Maxay jiidataa lugaha haweenka uurka leh?
Sababta ugu horreysa, xanuunka iyo xanjo xanuunka lugaha - xididdada isbeddelka ah. Waa in la ogaadaa in xididdada isbeddelka ahi ay tahay dhibaatada cadaadiska dumarka casriga ah, taas oo ah, sida caadiga ah, "naftiisa u dareemeyso" wakhtiga dhirta. Dabcan, tani maahan mid la yaab leh, sababtoo ah culeyska korodhay ee jirka marka lagu jiro uurka, cudurro badan ayaa sii xumeynaya. Ka soo kabashada dib-u-dhiska jirka iyo qaybaha hoose. Xaqiiqdu waxay tahay in ilmo-xannaaneyntu kordhiso xididdada waaweyn ee miskaha yar-yar, siday u kala horreeyaan, socodka dhiigga ee caadiga ah waa la carqaladeeyaa, iyadoo natiijada, dhiig-istaagga ayaa soo baxaya. Iyada oo kala duwanaansho, sawirka kiliinikada ayaa la buuxiyaa cuncun, cirridka lugaha, bararka, "vascular setochka." Bukaan-socodka leh xoojin kala duwan ayaa lagu taliyaa dhakhaatiirta: xirtaan dharka gaarka ah ee dharka, hoos u dhigga culeyska hoose, sameynta kabaha qubeyska iyo miisaanka. Xaalado dhif ah, waa lagama maarmaan in la daaweeyo daawo ama waxqabadyo qalliin.
Diiditaanka weylaha lugaha inta lagu jiro uurka waxay mar hore ku jiraan marxaladaha hore - haddii uu bukaanku raadsado dhakhtar cabasho noocan oo kale ah, dambe wuxuu u qaadan karaa in uu leeyahay urolithiasis ama kelyaha aan shaqayn. Mar labaad, wax waliba waxay la xiriiraan kororka koritaanka iyo koritaanka degdegga ah ee ilmo-galeenka, kaas oo cadaadinaya tubta. Natiijadu, natiijada ka soo baxda dareeraha ayaa hoos u dhacaysa iyo geedi socodka bararka ayaa dhacaya. Xaaladahaas oo kale, iyada oo aan la daaweyn daawo, iyo mararka qaarkood isbitaal-dhigashada, ma sameyn karaan.
Dhaqdhaqaaqa u dhexeeya lugaha muddada uurka - calaamadahan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu waxyeellada badan, sida caadiga ah, waxay u muuqataa inay sabab u tahay lafaha miskaha. Asal ahaan, cabashada noocan oo kale ah, haweenku waxay u jeedaan dhakhtarka marka la eego dhalmada, dhalmo yar oo aan fiicneyn ee ku jirta barta isbarbardhiga ee bartamaha xilli. Intaa waxaa dheer, mid ka mid ah sababaha hooyada mustaqbalka ay udhacdo inta u dhaxaysa lugaheeda inta lagu jiro uurka, waxaa jiri kara maqaar la'aan ku jirta jirka. Xaaladdan oo kale, tirtir dhibaatada si fudud adigoo isticmaalaya qalabka fitamiinada gaarka ah iyo cuntada.
Wuxuu soo celiyaa caloosha hoose, dhabarka danbe iyo lugaha inta lagu jiro uurka - dareenka la midka ah hooyada mustaqbalka ah wuxuu ku dhici doonaa miisaan culus, sababtoo ah miisaankiisu yahay bartamaha culeyska iyo bararka. Xaaladdan, waxaa lagula talinayaa in dib loo eego cuntada, gaar ahaan in laga reebo cuntooyinka cusbada leh, baruurta iyo dufanka leh. Sidoo kale waxay kordhisaa waqtiga loo seexiyo hurdo iyo nasasho. Haddii dareenka xun ee caloosha hooseeya ay weheliyaan dheecaan dhiig ah (gaar ahaan marxaladaha hore) waxaa haboon in la isla markiiba la xiriiro dhakhtarka.
Sida aad arki karto, suurtagal maaha inaad ka jawaabto su'aasha si aan caadi ahayn waxa la samaynayo haddii aad lugahaaga jiiddo inta aad uurka leedahay. Sababtoo ah waxaa jira dhowr sababood oo xaaladdan, iyo kiis kasta, qaababka daaweynta.
Sigaar cabid muddada uurka - madadaalo iyo xaqiiqda
Dareemidda wareegga embriyaha
Dharka isdabajooga ee haweenka uurka leh
Calaamadaha ugu horreeya ee uur-qaadidda ka dib dhalmada
Mezim xiliga uurka
Stoleta inta lagu jiro uurka
Muuqaalka dareeraha amniotic - miiska
Usbuuca 16aad ee uurka - maxaa dhacaya?
Coffee in Une
Polycystosis iyo uurka
9 bilood uurka
Shimbiraha iyo uurka waa cuntada saxda ah hooyada mustaqbalka
Kala saarida laabta inta aad uurka leedahay
Dhar dayrta qorraxda
26 siyaabood oo si aad u dheereynaya nolosha shelf ee alaabta
Halkee laga joogaa Sannadka Cusub - meelaha ugu fiican ee loogu talagalay Sannadka Cusub
Marka goosashada canab lagu beero - guga ama xilliga dayrta?
Guud ahaan quruxda dumarka
Dita von Teese waxay qorsheyneysaa inay samayso shaxanka
Sidee loo kariyaa toonta - cuntooyinka ugu macaan ugudhaca leh baaldiillaha basbaaska
Dheecaan - Guga 2015
Aqoonsiga ninka ganacsiga
Saxiixa - badan oo lamaane May
Cholenzim - calaamadaha loo isticmaalo
Horumarinta ciyaaraha carruurta 9 bilood
Sidee loo kariyaa barsada?
Waa maxay shakhsiyadda - cilmu-nafsiga shakhsiyadeed iyo wixii la xidhiidha
Mantra qurux iyo dhalinyaro
Cilmi-madow iyo caddaan
Qalbadda qoorta ka dambeeya
19 shaati oo ah madmadow diineed